“Tompo ô !...Ianao no manana ny Tenin’ny fiainana mandrakizay.” Jn. 6, 68 - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Moscou à la manœuvre à Madagascar il y a 4 jours
Eddy Kapuku, nouveau DG, s'installe aux commandes il y a 5 jours
Endettement, financement de l’IEM vu à travers le secteur énergie il y a 5 jours
Un DG pêche en eaux troubles il y a 6 jours
Le récit d'une partie de la soirée il y a 7 jours
Petit guide pour comprendre chaque jour de la Semaine sainte il y a 8 jours
Vonon-kiaro ny Lalampanorenana ary miantso ny mpifidy handray anjara il y a 8 jours
1 003 catéchistes du synode regional Sud-Est seront affiliés à la CNaPS il y a 8 jours
“Tsy afaka mijanona anaty antoko hanjakan’ny kolikoly aho” hoy Randriamandimbisoa Félix il y a 9 jours
“Tompo ô !...Ianao no manana ny Tenin’ny fiainana mandrakizay.” Jn. 6, 68
Novakiana nandritra ny lamesa lehibe natao tao amin’ny kianjan’i Masina Misely, Amparibe, ny Taratasin’ny Eveka. Indro izany hafatra izany.
Homba antsika mianakavy anie ny Fiadanana.
Tonga eto am-pamaranana ny Taonan’ny Finoana isika mianakavy, ary mankalaza ny faha-75 taonan’ny Baiboly Katolika Malagasy; ka velom-pisaorana an’Andriamanitra. Tsy mitsahatra ny Papa Fransoa mampirisika sy mitantana antsika amin’ny fiainam-baovao isan’andro ; indrindra ho an’ny fianakaviana sy ny fikolokoloana ny tanora amin’ny “fampijoroana ny Eglizy mahantra ho an’ny mahantra” ary tsy manary ny olombelona rehetra. Ankasitrahana be dia be koa isika, fa nijoro na dia maro aza ny sedra-piainana sy sedra-pinoana mampitsoaka an-daharana. Tsy mitsahatra ny mitady ny antson’Andriamanitra isika.
Anisan’ny nisongadina teo amin’ny fiainam-pirenena ny fifidianana. Deraina manokana ny ezaka vitantsika izay mampisy fanantenana hahatsara ny ho avy.
• Maneran-tany dia mitombo tsy miato ny hantsana eo amin’ny fari-piainan’ny zanak’olombelona. Manompo sarin-janak’omby volamena indray ny mpanankarena sy mpomba azy, hoy ny Papa Ray Masina Fransoa. Tsy mampiraika intsony ny loza sy famonoana ain’olona maro etsy sy eroa.
• Ho antsika Malagasy dia niseho tamin’ny endrika manokana izany tamin’ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany teo. Mahazo laka tanteraka ny fifanaratsiana sy fifanavakavaham-pihaviana sy foko ary ny fividianana ny safidim-bahoaka amin’ny fananam-bola sy harena. Nampitapim-bava ny vahoaka any ambanivohitra ny fampiderana fiara tsy mataho-dàlana sy fitaovana sarobidy isan-karazany toy ny elikoptera. Hay nisy volabe ihany ka nahoana no tsy nanasoavam-bahoaka hatramin’izay ?
• Miavaka roa ny vahoaka malagasy, dia andaniny ny mpanefoefo manontany ny ory, sy ankilany ny sahirana milomano amin’ny fahantrana. Tsy mandry fahalemana ary tsy voaaro intsony ny vahoaka maro an’isa; miroso mankany amin’ny Fanjakan’i Baroa sy didin’ny besandry ny fiaraha-monina.
Fa dia nahoana loatra !
• Ny fanatontoloana dia manao tery vay manta amin’ny fampiharana ity miralenta ity. Fampitovian-jo no andrandraina kanefa ny fototry ny maha-olona araky ny naharian’Andriamanitra azy mihitsy no zimbazimbaina, ka zary mampivarina ny lalam-pitondran-tena mitarika any amin’ny fanapotehana ny aina.
• Nohitsakitsahina ny Soatoavina Malagasy eo amin’ny fanajana ny Fihavanana tena izy, izay miorina amin’ny tantaram-pirenena sy ny kolontsaina ary ny toekarena, fa ny vola no terena hanjaka hatraiza hatraiza, ka tonga hatrany amin’ny fangalarana taova sy taolam-paty mihitsy aza.
• Maro ireo midongy seza ka misakana ny fifandimbiasam-pahefana. Ny tanindrazana mihitsy no viraviraina sy ifandrotehana, fa tsy notompoina hampiadana.
• Manampy trotraka ny fanararaotam-pahefana ataon’ireo vondrona iraisam-pirenena mahita ny fahalementsika. Vokany, rotidrotika ny fihavanana ka tsy afaka mifandamina intsony ny samy Malagasy.
• Ny mahagaga koa dia ny fivavahana indray izao no atao tohatra hahazoana seza sy fitondrana. Mampiteny ny moana !
“Mahaiza miaina am-piadanana ary manatanteraka tsara ny asanareo” (1 Tes 4, 11)
Tsy maintsy hiroso amin’ny fiainam-baovao isika, fa mamono tena sy mamotika tanindrazana, ary mandrava firenena raha sanatria mbola mitohy izao zava-misy iainantsika izao.
Ianareo ho fidiana
Mitodika aminareo mpirotsaka ho amin’ny fitondram-bahoaka isan’ambaratongany izahay : ianareo ho solombavam-bahoaka sy ho filoham-pirenena.
• Aza atao am-paladia ny fiandrianam-pirenentsika. Aza mivarotra tanindrazana. Lolohavy an-tampon’ny loha ny tena Fihavanana marina.
• Katsaho mandrakariva ny soa iombonana ka aza atao tahom-boanjo nahitana ny vahoaka Malagasy; rehefa nahazo toerana ianareo dia hadino ny fampanantenana natao azy, fa ny mpiray antoko na fihaviana na fianakaviana no tompon’ny tombontsoa rehetra.
• Anisan’ny lohalaharana ny fanasitranana ny ratra vokatry ny krizy ka hanao vain-dohan-draharaha ny fametrahana fanjakana tandalàna antoky ny fandriampahalemana sy fampivoarana ny vahoaka ao anatin’ny rariny sy ny hitsiny.
• Atombohy aminareo eo amin’ny fitondrana ny fanesorana ny toe-tsaina manavakavaka sy ny fiheverana ny sasany ho ambany. Adidinareo ny manome fanabeazana ny vahoaka ho olom-pirenena feno.
• Maika ihany koa ny hahatomombana ny fanadiovana ny tontolon’ny fitsarana sy ny mpitandro filaminam-bahoaka hamerina indray ny fifampitokisana.
• Anjaranareo ny miaro ny harem-pirenana sy ny mijery ny fitsinjarana azy ara-drariny hampivelatra ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra hiadanan’ny vahoaka Malagasy.
Mitodika amintsika vahoaka izay tena tompon’ny fahefana eto amin’ny Firenena :
• Fantaro fa tsy hisy izany fiorenam-pirenena matotra hampiadana izany, raha tsy voaorina ny tena fihavanana andrianintsika, ao anatin’ny fifankatiavana marina tsy misy fihatsaram-belatsihy. Maro samihafa ny fomba amam-panao (fomba fiteny, ohabolana, ny fomban-tany ….) fa harena ho antsika ny fahasamihafana raha haintsika ny manaja sy mampiasa azy ho entina mandrava ny fanavakavahana.
• Aoka ho sahy hanaja ny hasin’ny aina sy ny fahamarinana isika, tsy ho mora roboka amin’ny fihetsika tsy voalanjalanja, toy ny fitsaram-bahoaka sy fandrobana samihafa ary ny kolikoly sy ny tsolotra.
• Manana adidy isika hiaro sy hikolokolo ny tontolo iainana izay tena simba tokoa ka mitera-doza amin’ny fiainantsika andavanandro. Jereo ny toe-tany sy faritra maro : tsy mirindra intsony ny rotsa-korana… maty ny tantely sy ny biby madinika mahasoa isan-karazany ka mandrava ny rindran-damina voajanahary.
Izao no andro fiovàna
Manana adidy tsy azo ialàna isika mianakavy ka ‘ndeha hifanolo-tànana amin’ny fanorenana ny ampitso :
- tsy ho babon’ny akanga tsara soratra, ka hanary ny fahendren-drazana ;
- tsy ho taitran’ny doka sy varotra, ka hanary ny finoana itafiana. Tohizintsika hatrany iny vavaka fangatahana Fandriam-pahalemana iny.
Hankalaza an’i Kristy Mpanjaka isika ary mamarana ny Taonan’ny Finoana. Antso sy iraka manokana ho antsika ny fibebahana, ny fandalinana, ny fankalazana sy ny hetsika rehetra notanterahina tamin’iny taona iny. Fanomezan’Andriamanitra ho antsika ny Papa Ray masina Joany faha-XXIII nahazoana ny Konsily Vatikana II, sy Joany Paoly faharoa nahazoana ny Katesizin’ny Fiangonana Katolika sy ny JMJ, izay hatsangana ho olomasina amin’ny 27 avrily 2014. Hofohazintsika indray ireo lova masina maro nampianarin’izy ireo momba ny fiainam-pianakaviana sy ny tsy maintsy ho fahasahianareo tanora, tsy hatahotra ny handray an’i Jesoa ho namana hampita amin’ny tena fiainana. Koa hifanao soroka miara-milanja isika, ary handray anjara amin’ny fandalinana sahady ireo fanontaniana maro entina hanomanana ny “sinaody momba ny pastoralin’ny fianakaviana”. Aza miroaroa saina, fa raisintsika am-po indray ny tenin’i Md Piera, ka hiara-mandroso lalindalina tokoa hoe : “Tompo ô ! hankany amin’iza moa izahay, Ianao no manana ny Tenin’ny fiainana mandrakizay” (Joany 6, 68).
Dia mitso-drano anareo izahay Evekanareo.
Natao teto Antananarivo anio 17 novambra 2013
Andro fankalazana ny faha-75 taonan’ny Baiboly katolika Malagasy.
Mgr TSARAHAZANA Désiré, Arsevekan’i Toamasina, Filohan’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagascar
Mgr RAMAROSON Marc Benjamin, Evekan’i Farafangana, Filoha lefitra
Mgr RANAIVOMANANA Philippe, Evekan’Antsirabe, Sekretera Jeneraly
Mgr RAZANAKOLONA Odon Marie Arsène, Arsevekan’Antananarivo
Mgr MALO Michel, Arsevekan’Antsiranana
Mgr RABEONY Fulgence, Arsevekan’i Toliary
Mgr RABEMAHAFALY Fulgence, Arsevekan’i Fianarantsoa,
Mgr TOASY Armand, Evekan’i Port-Bergé
Mgr ROSARIO Saro Vella, Evekan’Ambanja
Mgr RAKOTONDRAJAO Roger Victor, Evekan’i Mahajanga
Mgr SCOPELLITI Antoine, Evekan’Ambatondrazaka
Mgr DI PIERRO Gaetano, Evekan’i Moramanga
Mgr RANDRIAMAMONJY Marcellin, Evekan’i Fenoarivo Atsinanana
Mgr BOMBIN ESPINO Gustave, Evekan’i Tsiroanomandidy
Mgr RANDRIANARISOA Jean Claude, Evekan’i Miarinarivo
Mgr RAKOTONARIVO Fidelis, Evekan’Ambositra
Mgr CAIRES DE NOBREGA José Alfredo, Evekan’i Mananjary
Mgr RAZAKARIVONY Fulgence, Evekan’Ihosy
Mgr RAKOTOZAFY Vincent, Evekan’i Tolagnaro
Mgr ROBASZKIEWICZ Zygmunt, Evekan’i Morombe
Mgr RAHARILAMBONIAINA Marie Fabien, Evekan’i Morondava
Mgr Georges VARKEY, Eveka Coadjuteur Port-Bergé
Mgr RAOELISON Jean de Dieu, Eveka Mpanampy Antananarivo
Mgr RANDRIAMBOLOLONA Philibert, Archevêque Emérite de Fianarantsoa
Mgr RAZAKARIVONY Raymond, Evêque Emérite de Miarinarivo
Mgr ZEVACO Pierre, Evêque Emérite de Tolagnaro
Mgr PELLETIER Donald, Evêque Emérite de Morondava
Connaître sa foi : Petit guide pour comprendre chaque jour de la Semaine sainte - il y a 8 jours
Fandraisana ny Papa Fransoa : « Faly aho handray ny Papa Ray Masina » hoy Ratsimbazafy Alain kandida Tim ao Atsimondrano - il y a 15 jours